ADAGAA IBRA!: Ibrahimovic oo kubad-xeebeed ciyaaray & dhakhtar la yaabay! – Gool FM
(Stockholm) 30 Luulyo 2017 – Dhakhtarka qalliinka fuliya ee Kristian Samuelsson ayaa sheegay inuu aad ula yaabay markii uu arkay qannaaskii Manchester United ee Zlatan Ibrahimovic uu kubad xeebeed ciyaaraya.
Ibrahimovic ayaa qalliin culus jilibka lagaga sameeyay bishii Abriil, kaasoo lagu sheegay inuusan ciyaari doonin ilaa bisha Oktoobar ugu horreeyn.
Yeelkeede, waxaa todobaadkan lasoo weriyay inuu Ibrahimovic saaxiibadii oo uu ku joro saaxiibkii PSG ee Marco Verratti uu la ciyaarayay kubad xeebeed.Laacibka khadka dhexe ee Juventus ee Riccardo Orsolini ayaa isna ku lug lahaa.
Samuelsson, oo ah nin ay aad iskugu dhow yihiin dhakhtarka qalay Ibra ee Freddy Fu oo laftiisu horay u sheegay inuu la yaabay adeeygga jilibka Ibra, ayaa qirtay inuu aad ula yaabay degdegta uu ku raystay Ibra.
Wuxuu u sheegay Expressen: “Aad bay macquul u tahay inaan bil kaddib kubad darbayso, balse inaad ciyaar dheesho kaddib 2 bilood…Waa wax naadir ah! Mana aha in la sameeyo.”
DAAWO: Dhakhaatiir iyagoo qalliin ku jira daawanayay ciyaartii Portugal-Chile